How kutengesera rangu chikepe paIndaneti danho nedanho ndiyo nyore nzira sei Ndinogona Sale vacation yangu nokukurumidza Via paIndaneti Internet yokutengesa basa
Sei Tengesai Boat wako nokuda Highest Price
Kuti ipfungwa yakanaka kuti igwa vakaongororwa saka unogona kudzidza pamusoro uye kugadzirisa chero matambudziko zvinogona muchikepe pamberi anoenderera mberi kumisika. Kana pasi, kana topsides vanoda pendi basa, zviite. Kana uri kupenda ari Hull, shandisa chena kana rima-mutema pendi chete. zvisinei, mumwe bhuroka rinokurudzira haana kushandisa mari iri zvemagetsi upgrades. Muchava chete kuwana chikamu chiduku kuti mubhizimisi shure.
Mutengo here. Mutengo here. Mutengo here.
Enda pane mutsetse uye tarisa dzose Indaneti. Yachtworld, BoatTrader, Boats.com nezvimwewo. nezvimwewo. Print kopi ose akafanana magwa neako. Cherechedza uwandu. Cherechedza chero kiyi inoratidza vamwe zvikepe vane kana havana. Uyewo tarisa dzimwe maawa magwa injini, rine turera, pasi pendi, etc., nezvimwewo. Izvi zvose zvinokosha chaizvo. Unofanira enzanisa maapuro maapuro. (Muenzaniso - akapendwa zvikepe trailerable pasi tengesa kuti asingasviki.) Ona nzvimbo apo zvikepe akarongwa. (Muenzaniso - zvikepe Florida tengesa kuti shoma - kupisa, zuva, mhepo, munyu uye gore kumativi kushandiswa.)
Kuzodana nevaichinja shoma kuti vane zvikepe kuti akafanana neako. Vaudze zvauri uye zvauinazvo. nevaichinja Most vanofanira kuva pamwe chaizvo. Vabvunze kuti nei chikepe ivo zvawanyora asina kutengeswa. Vabvunze kuti vanofunga kuti zvaizotora kutengesa chikepe chavo. Vabvunze zvavanofunga chikepe chako kunokosha. Vabvunze kana vakanga vachienda kuchinjanisa izvozvo chii vangadai kukupai nokuti.
Ongorora Pricing vatungamiriri BUC uye Nada, asi regai kuisa kutenda zvikuru zvavanotaura. Most izvi, mukufunga kwangu, vari zvachose kururama asi ivo chii pemahombekombe vanovakira dzenyu magwa chikwereti kukoshesa. Saka kunyange zvazvo kururama vachiri chinhu nezvacho.
Now gara pasi. Tarisai ose mashoko waita inounganidzwa. Change chii zvechokwadi tinorasikirwa kuomerera pane chikepe chako kuti zvimwe mwedzi shoma. Iva akatendeseka kwauri pachako! (chitsamba: chii iwe chikwereti muchikepe wako hakunei chokuita ayo chitoro ukoshi.) Usanetseka kuisa "shanyarika kamuri" iri nhamba yako. hamungambovi kunetseka "nzvimbo kutaurirana" kana munhu vachidzifudza. Zvino mutengo chikepe chako kuti inotevera munhu ikatengesa. Ndinoziva kuti zvinorwadza asi handina kurangarira chero mutengesi nokusingaperi achindiudza "Iii, Ini vakatengesa chikepe yangu zvakachipa!"
Top Ten Tips For kutengesa Boat Your
1. Market nayo!: Advertise zvikuru. Place shambadzo mu dzomunzvimbo Supreme wokudhinda, huru daily pepanhau uye, kana chiri chikepe chikuru kana mumwe dzisina kuwanikwa kuti vatengi vacho zvichida kufamba kubva ehurumende kuona, isa shambadzo ari pricier kwematunhu uye nyika yokuitira. Mufananidzo shambadzo kuswedera zvakawanda motokari. Rent nzvimbo dzimwe huru-divi yakawanda apo mazana Vanopfuura kuzviona-kupfuura rinochengeterwa yako.
2. Vanogumurwa-up!: Tanga injini uye ushamwari ndikaridya kweawa imwe tarisiro asati auya kuzoona chikepe. A akafa bhatiri kana balky kutanga-kunyange chakanakisisa injini-anotendeuka vatengi kure.
3. Rubatso yokuvimbika: Runako zvinokosha. Pfapfaidzo pamusoro fenicha Wakisi ingashandiswa akapukuta-kure nokukurumidza uye nyore. The gleam hahugari kupfuura zuva, asi zviri chakakwana kuti tarisiro iyoyo anodana uye anoti achava pamusoro neawa.
4. Empty Promise: Zviri nani kuratidza chinhu stowage nzvimbo uye Handimupinduri sei wakapamhama vari ipapo kuti zvose zvombo zvako tsvikinyidza mavari kusvikira kudonha. Bvisa crap yako.
5. Touch Points: A nyanzvi yksityiskohta basa musoro kuti chikepe mu pristine ezvinhu. Kana wako chikepe prices "paavhareji" kana "kunaka" pfungwa kungobva zvakawanda glaring makwapa. Remubatanidzwa-panze ngura echitema ropa kubva Fittings, ré-tepi anobvarurwa-bvarurwa vene mutsetse, de-kuzora injini, kuchenesa bilge, nezvimwewo. Kana kabhini iri musty, chinyararire nzvimbo mhepo freshners.
6. Fogged-kunze: Kana pachena namachira vari ndikamumara kana zvikanganiswe zera, kuvabvisa nokuti kutanga kuona.
7. Bottom Job: Kana chikepe iri pasi kupendwa, kushandisa nguvo yakanaka. Inoita chikepe zvionerei rakapinza. Uyewo mwaya kupenda outboard uye zvakasimba ngarurege skegs kuti vane pendi zvaipfekwa-kure.
8. Sea Trial: Pamwe kanivhasi abvisa, zvose asi yakachengeteka giya stowed kumahombekombe uye chiedza mune mafuta uye mvura, kwenyu chikepe kuda ndege nyore, mubato zvakawanda vachikurumidza, uye kuwana nokukurumidza pamusoro-mugumo nokukurumidza. Edza mutengi abvume kuti dzisanyanya atasve-pamwe shamwari uye mhuri shoma sezvinobvira, nokuti zvikonzero pamusoro, uye saka wechokwadi "roominess" muchikepe haisi inorwadza pachena.
9. Paper Chase: Vane zita zvose, kunyoresa, yose garandi uye, kana iripo, basa zvinyorwa paruoko ari bhainda. Hazvina fadza, kunyange kana mutengi wacho pakutanga kuti zvinoita Ho-nokuimba.
10. Iva Anonzwisisa: Figure kwenyu pasi-mutsetse mutengo pachine Rokusangana mutengi wokutanga. Funga dhora mari pakushambadzira, chengetedzo uye kugadzira apo zviri kutengeswa uyewo nguva mari dzinobatanidzwa pakuratidza chikepe.
Tora woenda nazvo: Three More Tips ...
11. Nyarara: Usabudisa mutengo nepaunogona pafoni munhu asina kuona chikepe. mumwe mutengi pamberi anoona chikepe chako, ava hapana inivhesitimendi mupfungwa. kunze, unoziva sei kuti anogona kuwana nayo? Plus, Vatengi pamusoro fenzi vanowanzova shamwari vanodana se "tarisiro itsva" achiedza okugumburisa kuzokutora.
12. Get Paid: Cash ndimambo. Macheki muri mukuru-kamwe ivo kubvisa. Vanonzi "Bank macheki" havasi tangofanana goridhe. All izvi itai ndiye "setifaya" kuti mutengi ane check mari nokuda musi nyaya. Vanogona akadzima sezvo nyore sezvo hwekubvisa pachako cheki. Regai nemasaini igwa pamusoro kusvikira unoziva unogona kupedza mari mutengi wacho.
13. Big Mubvunzo: Buyers kunokonzeresa kubvunza sei uri kutengesa. tsime, nokuti mari benzi. Asi haugoni kutaura kuti (kana kuti kwako vaneta tinkering pasina kubatsira mumwe garandi). Lifestyle kuchinja ndivo mhinduro yakanaka. Iti unoda kuedza cruising uye handigoni kuzviita muchikepe rakavhurika, vana vako musingaendi nemi zvakare saka imi havadi the chikepe, murege hove pemvura zvakare saka kuderedza iri muhurongwa, chero.